Ciidamada Ciraaq oo gaaray duleedka Tal Cafaar - BBC News Somali
Ciidamada Ciraaq oo gaaray duleedka Tal Cafaar
Image caption Ciidamada Ciraaq oo gaaray daafaha Tal Cafaar
Ciidamada Ciraaq ayaa lagu soo waramayaa in dagaal culus oo ay la galeen kooxda Daacish kadib ay u suurtogashay in ay gaaraan duleedka magaalada Tal Cafaar ee kooxdan ku xoog badantahay.
Magaaladan oo ka mid ah meelaha tirada yar ee ay wali ku xoog baddanyihiin kooxda Daacish ayaa waxa ay ku taalaa degmada Kifaax ee dalka Ciraaq.
Mid ka mid ah taliyeyaasha horkacaya ciidamada Ciraaq ayaa sheegey in dagaalyahanada Daacish ay soo ridayaan madaafiic, sidoo kalana ay waddooyinka ku aaseen miinooyin.
Ra'isulwasaaraha Ciraaq ayaa ku dhawaaqay hawlgalka lagula wareegayo Tal Cafaar maalintii axadda ahayd muddo bil uun kadib markii ciidamada ay la wareegeen magaalada Mosul oo ahayd fadhigii ugu weynaa ee Daacish.
Ra'isulwasaare Xaydar Cabadi ayaa sheegay in la rumeysanyahay in 2,000 oo kooxaha jihaad-doonka ah ay ku jiraan magaalada iyo illaa 40,000 oo shacab ah, wuxuuna ugu baaqay Daacish 'is-dhiibis ama dhimasho".
Tal Cafaar waa magaalada istaraatiiji ah oo ay degenyihiin dadka kasoo jeeda qowmiyadda Turkmen loo yaqaano, waxaana dadka halkaasi ku nool lagu qiyaasay illaa 200,000 ka hor intii aysan Daacish qabsanin bishii June sannadkii 2014-kii. Waxa ay magaaladan dhacdaa waddada hawlbowlaha u ah sahayda iyo badeecooyinka gaara magaalada Mosul ee ka gudubta xudduuda Suuriya oo kaga beegan dhanka galbeed masaafo dhan 150km.
Magaaladan ayaa go'doon ku jirtay sagaalkii bilood ee uu socdey dagaalkii Mosul, waxaana go'doodmiyey ciidamada Ciraaq oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka Shiicada ah ee lagu magacaabo Xashda Al Shaabi, balse waa markii ugu horeysey oo la'isku dayo in lagala wareego kooxda Daacish.
24 kii saac ee ugu horeeyay ee hawlgalka, ciidamada dowladda taabacsan waxaa la sheegey in ay Daacish kala wareegeen dhul dhan 235km , sida uu sheegay ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan gaashaan-buurta la dagaalamaysa Daacish ee dalalka badan isugu jira.
Isla maalintii labaad ee hawlgalka, ciidamada dowladda iyo kuwa taabacsan waxa ay gaareen duleedka magaalada.
Maalintii arbacada waxa ay duqeyn culus u geysteen difaacyada daacish ee ku teedsan magaalada ka hor intii aysan gudaha u galin qeybaha bari iyo koonfureed ee degmada Kifaax.
Kooxda abaabulka guud ee ciidamada ayaa bog ay leeyihiin ku sheegay in cutubkooda 11-aad, guutada gurmadka degdegta ah ee booliiska federaalka iyo waliba ciidamadda xoogga ee Ciraaq in ay si buuxda ula wareegeen degmooyinka Kifaax iyo Nuur, balse ma jirin xaqiijin ka timid xagga militariga oo arrintaasi la xiriirta.
Taliyaha ciidamada gaarka ah Jeneraal Xaydar Faadhil ayaa wakaalada wararka AP u sheegey in ciidamadiisa aysan la kulmin iska caabin badan, balse uu filayo in dagaalka intiisa badan uu dhici doono marka ay gudaha usii galaan magaalada.
Wuxuu jeneraalka intaas ku daray in uusan arkin wax shacab ah oo magaalada ka qaxaya, hase yeeshee Qaramada Midoobey ayaa ka digtey in kummanaan shacab ah ay isku dayi doonaan in ay magaalada ka qaxaan maalmaha soo aaddan.
Xiriiriyaha arrimaha bini'aadanimada Qaramada Midoobey ee Ciraaq Lise Grande ayaa sheegtay in xaaladda ay aad u adagtahay gudaha magaalada Tal Cafaar, islamarkaasina ay biyaha iyo cuntada ay gabaabsi sii yihiin, ayna adagtahay in dadka ay badbaadaan.
Illaa 30,000 oo shacab ah ayaa isaga cararay magaalada Tal Cafaar laga soo bilaabo dhammaadkii bishii April ee sannadkan , qaarkood oo badan ayaa soo gaarayay fariisimaha ciidamada Ciraaq iyaga oo haraadsan ama fuuqbaxay kadib markii ay soo lugeynayay illaa 20 saacadood jawiga oo aad u kulul.
Ciidamada Ciraaq oo billaabay duulaanka Tal Cafar
Ciraaq oo qabsatay buundada labaad ee Mosul